जनता भ्वाइस calendar_today १९ चैत्र २०७६, 8:48 am
सञ्चारकर्मी ऋषि धमलासँग विवाह गरेदेखि एलिजा गौतम बेलाबेला चर्चामा आइरहन्छिन् । उनी कहिले आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण चर्चित भइन्, कहिले आफ्नो पहिरनका कारण । उनलाई सर्वाधिक चर्चित त उनको पहिलो फिल्म ‘अनुराग’ ले बनायो ।
‘अमिताभ बच्चन, ऋषि कपुरजस्ता महानायकको फिल्म त ५ वटा फिल्म गर्दा बल्ल चल्छ भने हामी को हौं र एकैचोटी हिट हुने रु ट्रोल कलिउड तपाईं कहाँको सुपरस्टार हो ? मान्छे एकपटक लड्यो भन्दैमा एकचोटी फिल्म फ्लप भयो भन्दैमा मानहानी गरेर मान्छे मार्न खोज्ने ? निर्माता, कलाकारको बेइज्जत गर्ने को हो तपाईं, कसले दियो तपाईंलाई अधिकार हँ ?